Costa Rica dia hamela ny mponina sy ny olom-pirenenan'i Etazonia hiditra hatramin'ny 1 Novambra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Costa Rica dia hamela ny mponina sy ny olom-pirenenan'i Etazonia hiditra hatramin'ny 1 Novambra
Ny mponina sy ny olom-pirenena amin'ny fanjakana rehetra ao Etazonia dia avela hiditra Costa Rica manomboka ny 1 Novambra, fepetra iray hanampy ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena sy ny famoronana asa ny firenena, hoy i Gustavo J. Segura, minisitry ny fizahan-tany Costa Rica.
Manomboka amin'ny Oktobra 15, ny mponina ao Florida, Georgia ary Texas dia afaka miditra ao amin'ny firenena.
Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Minisiteran'ny drafitra nasionaly sy ny politika toekarena (MIDEPLAN), nisaina mifototra amin'ny Matrix Input-Output, mamela ny fidiran'ny olom-pirenena sy ny mponina amin'ny fanjakana rehetra ao Etazonia dia afaka mitentina 1.5 tapitrisa dolara amerikana ho an'i Costa Rica , izay mitovy amin'ny teboka 2.5 an'ny vokatra an-trano an-trano (GDP), ary asa manodidina ny 80,000 amin'ny taona 2021.
"Ny resadresaka ataontsika amin'ireo ekipa teknika eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina dia mamela anay hamaritra fa amin'ny fisokafan'ny tsenan'i Etazonia, ny zotram-piaramanidina dia mety hisarika eo anelanelan'ny 35% sy 40% amin'ny fifamoivoizana an-habakabaka amin'ny taona 2019, izay samy niainga tany Amerika Avaratra ary nifandray tamin'izany faritra izany. Io dia hahafahantsika mamelona indray ny fizahantany mba hahafahan'ny orinasa miasa, farafaharatsiny, ambonin'ilay teboka mandanjalanja mandritra ny vanim-potoana avo, izay manomboka amin'ny Novambra 2020 ka hatramin'ny Mey 2021. Mpizahatany mitsidika ny firenena no mampihetsika andiana rojom-pamokarana, toy ny fambolena, jono, varotra, fitaterana, torolàlana momba ny fizahan-tany, hotely, trano fisakafoanana, mpandraharaha, mpanao asa tanana - ary raha mijery an'izany isika dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fanohizana ny famerenana amin'ny laoniny, fiarovana ny fepetra ara-pidiovana manohitra ny COVID-19, "hoy ny fanazavan'i Gustavo J. Segura, minisitry ny fizahantany Costa Rica .
Hatramin'ny 1 septambra, ny mponina ao New York, New Jersey, New Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut, Maryland, Virginia ary ny Distrikan'i Columbia dia navela hiditra ao amin'ny firenena, ary Massachusetts, Pennsylvania ary Colorado dia efa nambara mialoha.
Ny fanjakan'i Washington, Oregon, Wyoming, Arizona, New Mexico, Michigan ary Rhode Island dia navela hatramin'ny 15 septambra, ary ny mponina ao California sy Ohio, hatramin'ny 1 Oktobra.
Talohan'ny areti-mandringana, ny tsena amerikana avaratra dia nitondra mpizahatany 1.6 tapitrisa ho an'ny tany Costa Rican, miaraka amin'ny salan'isa 12 andro ary fandaniana isan'andro US $ 170 isaky ny olona.
Ny haben'ny tsena mety ho an'i Etazonia dia mpizahatany 23.5 tapitrisa.
Fepetra takiana fidirana Ny mponina sy ny olom-pirenenan'i Etazonia izay te-hitsidika an'i Costa Rica dia tsy maintsy mahafeno fepetra telo:
1. Fenoy ny endrika nomerika antsoina hoe FAHASALAMANA
2. Raiso ny fitsapana COVID-19 RT-PCR ary mahazoa valiny ratsy; ny santionany amin'ny andrana dia tsy maintsy alaina 72 ora ambony indrindra alohan'ny sidina mankany Costa Rica
3. Makà fiantohana amin'ny fitsangatsanganana izay manarona trano hipetrahana raha misy kararantina sy fandaniana ara-pahasalamana noho ny aretina COVID-19. Ny fiantohana fitsangatsanganana dia tsy maintsy atao ary azo vidiana amin'ny mpiantoka iraisam-pirenena na Costa Rican.
Manomboka amin'ny 1 Nôvambra 2020, dia tsy ilaina intsony ny manaporofo ny fisian'i Etazonia mipetraka, satria avela hiditra ny fanjakana rehetra.
Ankoatra an'i Etazonia dia firenena fanampiny miisa 44 no nahazo alalana hiditra any Costa Rica hatramin'ny 1 Aogositra, andro nisokafan'ny seranam-piaramanidin'i Costa Rica.
Hatreto dia mpizahatany 6,000 eo ho eo no niditra teto, izay samy manaraka ny fifehezana azy rehetra, ary tsy nisy na iray aza voalaza ho mpitatitra na voan'ny COVID 19. "Mba hamelomana indray ny asa, ny fizahantany iraisam-pirenena dia fitaovana iray atahorana hametraka ny valanaretina epidemiolojika", hoy izy. ny minisitry ny fizahantany any Costa Rica.
Nahazo alàlana ny sidina rosiana hanohy ny sidina mankany amin'ny firenena 24
Manakaiky ireo mpitsidika eropeana azy i Seychelles